အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 10/04/2021)
အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးရာသီဥတုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းအဘယ်သို့ဆိုရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ. နောက်ဆုံးတော့, သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့, မ? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာငါတို့စာတမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် 365 နေရောင်၏ရက်ပေါင်း, အလင်းလေပြေနှင့်မိုဃ်းမရွာရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းစံပြရာသီဥတုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဲဒီမှာ start.
သည်အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ 1st တိုင်းပြည်: စပိန်
တစ်ဦးကမြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု, တစ်ဦးခိုင်မာတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ, ခရီးသွားလာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းများ, အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးနှင့်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ, အိပ်မက်တိုင်းပြည်စပိန်တော်တော်များများလုပ်. အနောက်တောင်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိပြီး, စပိန်ကျိန်းသေတဦးအဘို့ရေတွက် ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးသာယာလှပရထားခရီးစဉ်များ. စပိန် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ပူပြင်း, ခြောက်သွေ့သောနွေရာသီနှင့်ပျော့, မိုးရာသီဆောင်းရာသီ. စပိန်အကြီးမားဆုံးဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းက, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောရာသီဥတုရှိပြီး. ဒါကြောင့်, သငျသညျကျယ်ပြန့်အလယ်ပိုင်းကုန်းပြင်မြင့်အတွက်ပိုပြီးတိုက်ကြီး - သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရာသီဥတုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်: ပူပြင်းတဲ့အတှကျအဆင်သင့်မရ, ခြောက်သွေ့သောနွေရာသီနှင့် အအေးဆောင်းရာသီ. ဘာသာပြန်ချက်: သငျသညျလျှင် စပိန်မှခရီးသွားလာ နှင့်အစီအစဉ်ကိုလအနည်းငယ်အဘို့အတည်းခိုအပေါ်, ရေချိုးဝတ်စုံနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီယူလာ.
ပေါ်တူဂီ – အကောင်းဆုံးရာသီဥတုနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများအပေါ် 1st
အစား 35 + ° C မှဒီဂရီမှာထွက်ချွေးထက်နီးပါးတစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးပျမ်းမျှ 22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုခံစားချင်ပါတယ်တဲ့သူကိုသင်တို့တွင်သူတို့အဘို့, ပေါ်တူဂီအကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများအပေါ် 1st ဖြစ်ပါသည်. ပေါ်တူဂီ Csb ရာသီဥတုအဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ် (ဒီအသုံးအနှုန်းကမြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုကိုရည်ညွှန်းသည်); တစ်ပူနွေးသမပိုင်းစိုစွတ် သစ်တောရာသီဥတု, ခြောက်သွေ့သောနွေရာသီနှင့်အတူ, နှင့်စိုစွတ်သောဆောင်းရာသီ. သငျသညျရထားခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, နွေရာသီလအတွင်းပေါ်တူဂီများအတွက်ရွေးချယ်. ပေါ်တူဂီအတွက်အပူဆုံးလ 24 ° C ၏ပျမ်းမျှအပူချိန်နှင့်အတူဇူလိုင်လဖြစ်ပါသည်, နှင့်အအေးဆုံးတဦးတည်း 12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဇန်နဝါရီလဖြစ်ပြီး. သငျသညျသြဂုတ်လအတွင်းအများဆုံးနေ့စဉ်နေရောင်ခြည်နာရီဖမ်းပါလိမ့်မယ်. Plus အား, သင်အမြဲလုပ်နိုင် ရထားခရီးစဉ်အနောက်ဥရောပ အကောင်းဆုံးကိုစှဲများအတွက်, မသက်ဆိုင်သင်မြင်ချင်သောနိုင်ငံများရာသီဥတုအခြေအနေများ၏.
ဥရောပ၏ဤအပိုငျးနဲ့မေတ္တာ၌သင်တို့ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုနောက်ထပ်မြေထဲပင်လယ်နိုင်ငံတစ်ခု. ဂရိနိုင်ငံမြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု၏ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်. ခရီးသွားဧည့်နှင့်ဒေသခံများ ယင်း၏နွေးခြောက်သွေ့သောနွေရာသီထိုသို့ကိုချစ်, အပျော့စားနဲ့ မိုးရာသီဆောင်းရာသီ, ယခုနှစ်အများဆုံးတစ်လျှောက်လုံးနေရောင်ခြည်နှင့်တိုးချဲ့ကာလ. ဂရိနိုင်ငံအကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူသူတို့အားဥရောပနိုင်ငံများရုံတစျခုဖွစျသညျနှငျ့သငျက၎င်း၏လှပမှုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ဖို့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးသွားပါရန်ရှိသည်. စုံလင်သောမြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု၏စကားပြောသော, ကျွန်တော်လည်းအီတလီနိုင်ငံဖော်ပြထားခြင်းသာတရားမျှတရဲ့, ယင်း၏နွေရာသီလေတိုက်နှုန်းအလွန်ပူပြင်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပေမယ့်, မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာသီဥတုလူတိုင်းမရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ.
ဗြိတိန်နိုင်ငံ – အကောင်းဆုံးရာသီဥတုနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများစာရင်းတွင်အဆိုးဆုံး
လုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပေမယ့်ဗိသုကာလက်ရာမြောက်, သမိုင်းကြောင်းအ, နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး. ကောင်းစွာ, သငျသညျအမွဲမြူပျော်မွေ့မဟုတ်လျှင်, မိုးရေ, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနှင့်သင်သည်အခြားအရောင်များတူအဘယ်အရာကိုမေ့လျော့သောမီးခိုးရောင်သိပ်. အဆိုပါ damp လေကြောင်းနှင့်၎င်း၏စုစုပေါင်းခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်စေမကူညီကြဘူး. ဗြိတိန်နိုင်ငံကဒီမှာရှိနေသာအံ့သြဖွယ်ရှိပါဘူးနေစဉ်, ငါတို့သည်မရန်သင့်အားအကြံပေး (အစဉ်!) တစ်ဦးထီးနှင့်တစ်ဦးအပိုတီရှပ်မပါဘဲထွက်သွားပါ. ထိုအထုတ်စစ်ဆေး4ဥရောပ၌မီးရထားခရီးသွားလာ Pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုသွားမတိုင်မီ.
ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခု, အိုက်စလန်သည်၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ fjords အပေါ် prides, အဆုံးမဲ့မြအစိမ်းရောင်ရှုခင်းများ, ဆီးနှင်းဖြူသောတောင်ပေါ်ထိပ်, နှင့်အံ့မခန်းရေတံခွန်များ. Oh, ရဲ့ယင်း၏အလွန်ကြီးမားသောရေခဲမြစ်မေ့လျော့တော်မပါစေ, ရေပူစမ်း နှင့်ရေပူစမ်း, အဆိုပါ friendliest နှင့်အချို့, ကမ်ဘာပျေါတှငျကလူ! သို့သျောလညျး, ကံမကောင်းသဖြင့်, ဒီစကင်ဒီနေးတိုင်းပြည်သည်၎င်း၏ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာရာသီဥတုကအဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်. အိုက်စလန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ် 320 ထူသောမီးခိုးရောင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး၏ရက်ပေါင်း, 215 မိုးရွာရက်ပေါင်း, နှင်းမုန်တိုင်း, နှင့် Blizzard. ဒါဟာနေသာ vacay ခံစားရန်ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး.
သို့သျောလညျး, သင်တို့တွင်အပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင် ဆောငျးရာသီအားလပ်ရက်, အိုက်စလန်အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများသင့်ရဲ့စာရင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာပါလိမ့်မယ်.
အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပနိုင်ငံများသင်တို့အဘို့ရှာမည်! နှင့်သင့်ခရီးစဉ်ကိုခံစား! ရထားစီးနင်းများအတွက်ရွေးချယ်နှင့်သင့်စာအုပ်ဆိုင် အတူရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ဦးရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-countries-best-weather%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#britian #အေးအေးဆေးဆေး #ဂရိ #ပူ #ချစ်တယ် #အိုက်စလန် #ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း #ရာသီဥတု travelportugal travelspain